En vente actuellement 12/11/2018
Jus voasary sy kaokaombra, in-3 isa-kerinandro : Sady mihena no salama !
Manafaingana ny fampihenan-tena ny fisotroana zava-pisotro natoraly voavaotra manokana. Sady miady amin’ilay fahatsapana ho noana lava mantsy izy ireny no ahitana singa mandoro tavy sy manadio ny ao anaty koa. Ity atoro anao ity izao, dia azonao andramana
Nahoana no heverina fa mankarary kibo ny voankazo sasany ?
Ireo horonan-tsary nanamarika ny fiainan’ny mpilalao azy
1. Mbola vao 13 taona monja i Linda Blair, tamin’ny fotoana nilalaovany tao anatin’ilay horonan-tsary “L’exorciste” ka nampalaza be azy.
Nisaraka dia mifamerina, ahoana no hanarenana ny tokantrano ?
Na mafy tahaka ny inona aza ny fifamaliana teo am-pisarahana, dia mety mbola hifamerina ihany ny olon-droa
Sablé amin’ny sésame, mora karakaraina
Akora ilaina · Dibera 250g · Siramamy 125g · Lavanila 1sk · Leviora simika 1 sk · Lafarinina araka izay ilaina 400g eo ho eo · Sésame 100g
Shopping « chaussures »
1. Sandales noir stylé. Pointure : 35 à 40. Hauteur talon : 10cm. Prix : 130.000Ar. « Sur commande » Facebook "Kalajejou Tia Vao" - « Narindra Ramamonj’s »
Manaingo efitrano amin’ny voninkazo…
Ho an’ireo mpankafy voninkazo ka maniry ny hampiditra azy ho isan’ny haingon-trano ihany koa dia tavim-boninkazo tsotra nefa miavaka no zaraina aminao anio.
Hoditra main’ny masoandro, toy izao ny fikoloana azy…
Aza iodivirana mihitsy ny akora miaro amin’ny masoandro rehefa migaingaina tahaka izao ny andro. Mila arovana amin’ny taratry ny masoandro foana mantsy ny hoditra. Raha toa anefa ka sendra main’ny masoandro ihany dia misy ny akora natoraly azo hanalefahana izany.
Ho azo fafana ny hafatra miafina diso adiresy amin’ny Facebook
Ho azo atao atsy ho atsy ny mamono ireo hafatra miafina nalefa tsy nahy na diso adiresy amin’ny alalan’ny Messenger ao amin’ny tambajotram-pifandraisana Facebook.
“Momo challenge” : Zazalahy 14 taona no hita faty tao an-tranony vokatr’ity lalao ity
Zazalahy iray 14 taona no hita faty niantona tao amin’ny efitranony tamin’ny alalan’ireny fehikibona “kimono” ireny, tany Frantsa.
Mpivaro-tena nanolana ankizilahikely 14 taona
Voaheloky ny Fitsarana ao San Antonio, Etazonia handoa lamandy 50.000 dolara i Jacqueline Alonzo, tovovavy 28 taona. Fanolanana zaza tsy ampy taona sy manana olana ara-tsaina no hanamelohina azy.
Lazao ny ranomanitrao, dia ho fantatra ny toetranao …
Anisan’ny azo hamaritana izay mampiavaka ny olona iray ny ranomanitra tiany. Ny fofona tian’ny olona iray tokoa mantsy dia ampy hahafantarana ny maha izy azy sy ny toetrany. Ireto ary ireo karazana fofona ranomanitra sy ny toetran’ny vehivavy mankafy azy.
Efa te hiaraka amin’olon-kafa indray aho nefa tsy hitako izay safidiana. Misy 4 amin’izao no te hiaraka amiko, mitovitovy toetra daholo. Mba mila torohevitra.